Somaliland News - Wararka Wargeyska OGAAL, Khamiis, 17 July Home
Wararka Wargeyska OGAAL, Khamiis, 17 July 17 Jul, 2008 - �Cadaawadi nagama dhaxayso Aniga iyo Muuse Biixi, khilaafna ma jiro�
Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa beeniyay war uu faafiyay Wargeyska Maalmaha cadadkiisii shalay, kaas oo uu Wargeysku ku sheegay in Guddoomiye Axmed-Siilaanyo iyo Gudoomiye ku xigeenka 1-aad ee xisbigaas Muuse Biixi Cabdi isku maan-dhaafeen qaybo ka mid ah shuruudaha Guddida qaban-qaabada shirka Golaha dhexe ee Xisbiga Kulmiye ku soo rogeen Xubnaha u tartamaya Musharaxnimada Xisbiga ee Madaxweynaha oo $15000 Doollar qadimaya iyo Madaxweyne Ku-xigeenka oo laga rabo $10,000 Doollar oo aan celis lahayn.
Guddoomiye Axmed Siilaanyo oo Wargeyska Ogaal xalay wax ka weydiiyay arrimahaasi waxa uu sheegay, in aanuu jirin wax ismaandhaaf ah oo ka dhex aloosan Hogaanka sare ee Xisbiga, isla markaana waxa uu ku dooday in qaban-qaabada Shirka Golaha dhexe ee Kulmiye uu u socdo si wanaagsan. �Shirku wakhtigiisii ayuu ku socdaa, si wanaagsana hawshiisu way u socotaa. Doodaha yar-yar ee Xisbiga dhex-diisana wax dhib ah oo ku jirtaa ma jirto, Guddida qaban-qaabo ayaa jirta oo soo jeedimaheeda leh. Waxa anagu shirarka gudahayaga aanu isku nidhaahnaana waa wax gudahayaga ah oo macno ay leedahay ma jirto. waxaanu isku diidanahayna habayaraatee ma jirto. Laakiin dadku doodaha gudahayaga ayay maalin walba war ka dhigayaan.� Sidaas ayuu yidhi Axmed-siilaanyo, mar aanu sii waydiinay waxa ka jira, lacagta lagu xidhay xubnaha doonaya inay u tartamaan Musharaxnimada Xisbiga inay Guddoomiye ku-xigeenka 1-aad isku maandhaafeen , waxa uu yidhi, �Maya, waxba iskumaanu maandhaafin. waa la doodi karaa, wax waa la iska waydiin karaa, waa laga munaaqishoon karaa taasina khilaaf maaha, waana macquul in marka shir la isugu yimaado ee Guddidu wax soo jeediso in qofna yidhaa way badan tahay, qofna yidhaahdo way yartahay, qofna yidhaahdo naga daaya, qof na yidhaahdo inoo yareeya. Taasina Aniga iyo Muuse cadaawadi nagama dhaxayso khilaafna ma jiro, xubnaha oo dhan waa iska dood dhexdayada ah ee wax aanu iskaga soo horjeedno anagu oo qofna wato qofna diidan yahay ma jirto. Laakiin falanqayni way na dhex martaa oo waa caadi taasi. Hase ahaatee, markaan runta kuu sheego waxba ma jiraan ee waa wixii caadiga ahaa ee ay jeclaan jireen reer UDUB inay fidiyaan.�
Sidoo kale Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), mar wax laga waydiiyay khilaafaad hoose oo Xisbiga gudihiisa la sheegay inuu ka jiray intii ka danbaysay shirweynihiisii labaad, kaasoo u baahan turxaan-bixin. Wuxuu ku jawaabay; �Xisbiga Kulmiye khilaafaad kama dhex jiro, waana tii la ogaa Shirweynihii ugu balaadhnaa, ugu wanaagsanaa oo aan Xisbi kale oo qabsaday jirin ayuu qabsaday Kulmiye, waana tii guushiisa ummada iyo dunida oo dhami wada arkaysay ee ay noo hambalyeeyeen.� Axmed-siilaanyo waxa uu intaa ku daray oo uu yidhi, �Qof-qof iska shaqsi ah oo doonayay inuu Xisbiga ku soo baxo ama Golaha dhexe noqdo wuu jiri karaa oo waa iska dabiici. Laakiin, khilaaf la kala jabay oo la kala tagay xageed ku aragteen ma jiro�e. Todoba Boqol oo qof oo isu yimi oo dad badanina doorasho doonayeen ileen meel xor ah ayay ahayde qofna wuu waayayaa qofna wuu helayaa. Markaa qofkii waayay inuu yara cawdo ama uu niyada ka jeclaa inuu helaa way jiri kartaa oo dimuquraadiyada ayay ka mid tahay. Laakiin, wax kala faqay, wax kala tagay iyo wax kala jabay Kulmiye midna ma jiro oo xisbigu waa mid.�
Axmed-siilaanyo mar uu ka jawaabayay su�aal laga waydiiyay sababta Shirka Golaha dhexe ee Kulmiye loogu qabanayo Magaaladda Burco oo dadka qaar ku xidhiidhiyeen khilaafaad Xisbiga gudihiisa ahi in uu sababay, waxa uu tilmaamay in Magaalooyinka Somaliland isku mid yihiin, isla markaana Magaalo kasta lagu qaban karo shirarka Axsaabta. �Muxuu yahay farqiga u dhexeeya Hargeysa iyo Burco Shirarka lagu kala qabtaa? Burco waa magaalo weyn Xisbiguna taageerayaal ku leeyahay sida uu Hargeysaba taageerayaal badan ugu leeyahay, Guddida qaban-qaabada oo Gobol walba leh ayaa soo jeediyay oo isku wada raacay in Shirka Burco lagu qabto, cid isku khilaaftayna ma jirto.� Source:Ogaal